IPCop အကြောင်း လေး .. ပြောပြပေးကြပါဦးဗျာ ...။ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
» Linux များ (သို့) Linux နှင့်ဆိုင်ရာများ
IPCop အကြောင်း လေး .. ပြောပြပေးကြပါဦးဗျာ ...။
နိုင်ငံအလံ: ကျေးဇူးတင်စကား: 605
ပို့စ် 10 ခုအတွက် 29 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ဖိုရမ်မှာ .. ရှိတဲ့ . အစ်ကိုအစ်မတွေ ..အားလုံးပဲ .. Linux .. IPCop အကြောင်းလေး . ပြောပြပေးကြပါလား ဗျာ .. http://ipcop.org/ အဲဒီ .. ဆိုဒ်ကို . ၀င်တော့ . ကြည့်တယ်ဗျ . ကျွန်တော်က . အင်္ဂလိပ်စာလဲ . သိပ်မကောင်းတော့ .. အဆင်မပြေဘူးဗျ .. ဘယ်လို စမ်းရမယ် .မသိ့ဘူး . သိ့တဲ့ . လူများ ရှိရင် .. ပုံလေးတွေနဲ့ တင်ပြီး .. သူအကြောင်းလေးကို . ရှင်းပြပေးပါလားဗျ .. ကျွန်တော့် အသိ့ ရုံးမှာ .. IPCop ထိုင်တာ ကောင်းတယ်လို့ . ပြောကြတယ်ဗျ ... နောက်ပြီး . သူက .. Motherboard ပေါ်က . Network Pot ကို Detect
မသိ့ဘူးလို့လဲ . ပြောကြတယ် .. Network ဆိုဒ်ပြီး . သုံးရတယ်တဲ့ .. ဖိုရမ်မှာ . သိ့တဲ့ . အစ်ကိုအစ်မများ .. ပြောပြပေးကြပါဦးဗျာ .... ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .....။ IPCop ကို Version 1.4.20 နဲ့ Version 2.0.0 ကိုတော့ . Download ဆွဲပြီးသွားပြီဗျ .. ဘယ်လို လုပ်ရမှန်း .. မသိ့လို့ ... သင်ပေးကြပါဦးဗျာ .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ....။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ thura.it အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, seamonkey, zo
Find More Posts by thura.it
ပြန်စာ - IPCop အကြောင်း လေး .. ပြောပြပေးကြပါဦးƛ
ကြိုက်သလို ဖွင့် ကြိုက်သလိုပိတ် ဘာမှ မဖြစ်ဘူး
စိတ်ဝင်စားရင် တင်နည်း ပြောပြမယ်
bomberman512@gmail.com ကို ဆက်သွယ်ပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ agmgldrko အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by agmgldrko
20-11-2012, 11:31 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Nov 2012
ကျွန်တော်လဲ ipcop server ထိုင်ချင်ပါတယ် ။ ကူညီကြပါအုန်းချင်ဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ အောင်ကိုဟိန်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by အောင်ကိုဟိန်း
16-08-2016, 05:21 PM
တို့ညီအကို တွေနေကောင်းကြရဲ့လား ရှိကောရှိကြလား ipcop ဆရာကြီးတွေလာကြပါဦး ပြသနာလေးတွေရှိလို့
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ oasislove အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
29-08-2016, 10:04 AM
နိုင်ငံအလံ: ကျေးဇူးတင်စကား: 18,613
ပို့စ် 1,035 ခုအတွက် 5,988 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ipcop သုံးနည်း မြန်မာလို အပေါ်ကစာအုပ်မှာ သုံးထားတဲ့ putty & winscp380 See You When I See You
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 08:32 PM